🥇 ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်အတွက်အစီအစဉ်
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 4.9. အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်: 15
စတိုးဆိုင်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းအစများ (အများအားဖြင့်အဝတ်အစား၊ အများအားဖြင့်ဖိနပ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစသည်တို့) စတိုးဆိုင်၌ရောင်းဝယ်ခြင်း - အတော်လေးတိကျသောကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအထူးလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရင်းကိုင်များသောအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာမှတ်တမ်းများနှင့်ရောင်းအားအမြောက်အများနှင့်အတူမှတ်တမ်းအားလုံးကိုအမျိုးအစားများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းပါဝင်သည်။ စတိုးဆိုင်ပရိုဂရမ်ကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်စေရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်အတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုစီသည်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိုစုစည်းရန်၊ အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနှင့်စနစ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန် (အထူးသဖြင့်အရောင်းဌာန၏လုပ်ငန်း) ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချို့သောမန်နေဂျာများကကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်အစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ယူရန် ပို၍ ဈေးချိုသည့်နည်းလမ်းကိုတွေ့ပြီဟုယူဆပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအခမဲ့ရောင်းချရန်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်ကိုတောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းရောင်းရန်အစီအစဉ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ပြtheနာအားဤချဉ်းကပ်မှုသည်လုံးဝမှားယွင်းကြောင်းနှင့်အလိုအလျောက်စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်များအပေါ်သင်၏ယုံကြည်မှုအားလျော့နည်းစေရုံသာမကသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်ဟုရှင်းပြသင့်သည်။ အမှန်မှာပရိုဂရမ်မာတိုင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ရောင်းရန်အခမဲ့ပရိုဂရမ်၏ထိန်းသိမ်းမှုကိုဂရုမစိုက်ကြပါ (အကယ်၍ ရှိလျှင်ငွေကြေးကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲ) နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကိုအနှေးနှင့်အမြန်လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ ပေါ်လာ။ တနည်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော developer များထံမှ ၀ ယ်ယူသောရောင်းချမှုအတွက်သာအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစီအစဉ် - USU-Soft ။ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းရန်အတွက်ဤအစီအစဉ်သည်၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာသောအားသာချက်များရှိပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာပြသနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှု၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ သာမာန်ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မျှတသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်တို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ USU-Soft ၏ developer များသည်နိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုအမှတ်အသားရှိ D-U-N-S ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကုန်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အထောက်အကူပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရောင်းဝယ်မှုအစီအစဉ်သည်သင့်အားစတိုးဆိုင်တွင်းရှိစံပစ္စည်းကိရိယာများသာမကစတိုးဆိုင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ - ဘားကုတ်စကင်နာများ၊ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၊ ခေတ်သစ်ဒေတာစုဆောင်းမှုဆိပ်ကမ်း (DCT) - စတိုးဆိုင်အားလုံးကမကျွမ်းကျင်သေးပါ။ ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေဖြင့်မိမိအိတ်ကပ်ထဲထည့်။ လိုအပ်သလိုအသုံးပြုသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဥပမာ - စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်များစွာသိမ်းဆည်းသည်။ ဒေတာများကိုဖတ်ပြီးအဓိက database သို့ပြောင်းသည်။ ဒီကိရိယာဟာသိသာထင်ရှားသောအပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သောအချက်အလက်ပမာဏကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သိုလှောင်ရုံများ၌ပစ္စည်းများများလွန်းပါက၎င်းတို့အားလုံးကိုဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့ထည့်သွင်း။ ငွေစာရင်းရောင်းဝယ်မှုစနစ်၏သိုလှောင်နိုင်စွမ်းသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဖောက်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုငွေသားကောင်တာသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စာရင်းကိုင်စနစ်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အမိန့်စီမံခြင်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အမည်၊ နာမည်၊ အမည်နာမနှင့်လိုချင်လျှင်သူသို့မဟုတ်သူမနှစ်သက်သောဆန္ဒများစသည်ဖြင့်ထည့်သွင်းပါ။ ၀ ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းအတွက်အပိုဆုကြေးများကိုချီးမြှင့်သည်။ စတိုးဆိုင်အားလုံးသည်ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဤနည်းဗျူဟာကိုကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့်၊ လူအနည်းငယ်ကသင်၏စုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းများအစားငွေအစားဤစုဆောင်းသောအပိုဆုများကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည်။ ၀ ယ်ယူသူသည်မည်သည့် ၀ ယ်သည်ကိုဝယ်ယူပြီးအပိုဆုကြေးကိုလက်ခံရရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူမနှစ်သက်သောအရာကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပို။ ပို။ သုံးစွဲရန်သူသို့မဟုတ်သူမအားအခြားအရာတစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းများကိုသင်လွှတ်လိုက်သည်။ သုံးစွဲသူများကိုသတင်းအချက်အလက်များပြားသည့်ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်သို့လွယ်ကူစွာသွားလာရန်ဖောက်သည်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာမည်သည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမဆိုလိုအပ်သည်။
ဤဌာနခွဲကိုမတူညီသောစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံနိုင်သည် - လည်ပတ်မှုအရေအတွက် (ပုံမှန်နှင့်ရှားပါးသောဖောက်သည်များ) အပေါ်အခြေခံသည်။ တိုင်ကြားချက်များမရှိခြင်း (တိုင်ကြားမှုမရှိသူနှင့်အမြဲတမ်းလုပ်နေသူများအပေါ်) တိုင်ကြားချက်ရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍၊ ၀ ယ်ယူမှုအချို့အပေါ် မူတည်၍ အသက်၊ နေထိုင်ခွင့်လမ်းစသည်။ အချို့ဖောက်သည်များပင်လျှင် VIP အဆင့်အတန်းနှင့် ၄ င်းတို့အားပေးရမည့်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုရထိုက်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်စေရန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံ ၄ မျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ Viber၊ SMS၊ အီးမေးလ်နှင့်အသံခေါ်ဆိုမှုပင်။ သင်သည်ကြော်ငြာများ၊ ကတ်တလောက်များ၊ အထူးကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ သို့မဟုတ်ပွဲနေ့များကိုဖိတ်ကြားခြင်း၊ အားလပ်ရက်များ၌ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အမှားများကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပါသလား။ သငျသညျ monotonous အလုပ်အချို့ပိုကောင်းမြန်ဆန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည့်စက်သို့ပြောင်းချင်ပါသလား? သင်၏ပြိုင်ဘက်များနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေစေရန်သင်၏စီးပွားရေးကိုဤမျှလောက်တိုးတက်အောင်လုပ်လိုပါသလား။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအံ့သြလောက်အောင်အံ့အားသင့်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားလုံးတွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ demo version ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီတွင်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ငါတို့ပြောသမျှမှန်သည်မမှန်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအလိုအလျောက်စနစ်နှင့်စီးပွားရေးကိုခေတ်မီအောင်လုပ်ခြင်းသည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲသင်ဆက်လက်အသုံးပြုလိုသည်ကိုသင့်အားအာမခံနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမြဲဆက်သွယ်နေပြီးသင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေကြားပေးရပါမည်။
ကုန်သွယ်ရေး software ကို